I-Adobe XD: Idizayini, iPrototype, kanye noKwabelana ngeSixazululo se-UX / UI se-Adobe | Martech Zone
I-Adobe XD: Idizayini, iPrototype, kanye noKwabelana ngeSixazululo se-UX / UI se-Adobe
NgoLwesithathu, July 18, 2018 NgoLwesibili, ngoJulayi 17, i-2018 Douglas Karr
Namuhla, ngifake i-Adobe XD, isisombululo se-UX / UI se-Adobe sokwenza amawebhusayithi, izinhlelo zewebhu, nezinhlelo zokusebenza zeselula. I-Adobe XD inika amandla abasebenzisi ukuthi bashintshe kusuka kuma-static wireframes baye kuma-prototypes wokusebenzisana ngokuchofoza okukodwa. Ungenza ushintsho kumklamo wakho bese ubona isibuyekezo sakho sombukiso ngokuzenzakalela - akukho ukuvumelanisa okudingekayo. Futhi ungabuka kuqala ama-prototypes akho, agcwaliswe ngokushintshwa kumadivayisi we-iOS ne-Android, bese wabelana ngawo nethimba lakho ukuthola impendulo esheshayo.
Izici ze-Adobe XD Faka:
Ama-prototypes asebenzisanayo - Shintsha kusuka ekwakhiweni uye kumodi ye-prototype ngokuchofoza okukodwa, bese uxhuma amabhodi wabuciko ukuxhumana ukugeleza nezindlela zezinhlelo zokusebenza zesikrini esiningi. Xhuma ama-elementi wedizayini kusuka ku-artboard eyodwa kuya kwenye, kufaka phakathi amaseli we-Phinda Igridi. Faka ukusebenzisana nezilawuli ezibukwayo ezinembile ukuhlola nokuqinisekisa okwenziwayo.
Shicilela ama-prototypes ngempendulo - Khiqiza izixhumanisi zewebhu ongabelana ngazo ukuze uthole impendulo kumiklamo yakho, noma uzishumeke ku-Behance noma ekhasini lewebhu. Ababuyekezi bangaphawula ngqo kuma-prototypes wakho nasezingxenyeni ezithile zomklamo wakho. Uzokwaziswa lapho benza amazwana, futhi bangavele bavuselele iziphequluli zabo ukuze babone ushintsho lwakho.
Amabhodi wobuciko asheshayo, ahlukahlukene - Noma ngabe usebenza nge-artboard eyodwa noma eyikhulu, i-XD ikunikeza ukusebenza okusheshayo okufanayo. Idizayini yezikrini ezahlukene namadivayisi. I-Pan ne-zoom ngaphandle kwesikhathi sokusalela. Khetha osayizi ababekiwe ngaphambili noma uchaze okwakho, bese ukopisha phakathi kwamabhodi wobuciko ngaphandle kokulahlekelwa ukubekwa kwezinto zakho zedizayini.
Phinda Igridi - Khetha izinto kumklamo wakho, njengohlu loxhumana nabo noma igalari yezithombe, bese uziphindaphinda ngokuvundlile noma ngokuvundla kaningi ngendlela ofuna ngayo - zonke izitayela zakho nezikhala zakho zihlala zingaphelele. Buyekeza i-elementi kanye futhi izinguquko zakho zizovuselelwa yonke indawo.
Ukusekelwa kwe-cross-platform - I-Adobe XD ngokwendabuko isekela iWindows 10 (Universal Windows Platform) neMac, nezinhlelo zokusebenza ezihambisanayo ze-Android ne-iOS.
Iphaneli yamafa - Yenza imibala nezitayela zezinhlamvu zitholakale kalula ukuze uzisebenzise futhi ngokuzifaka kuphaneli yamafa (ngaphambili iphaneli lezimpawu), okubandakanya ngokuzenzakalela izimpawu. Hlela noma yimuphi umbala noma isitayela somlingiswa kuphaneli futhi izinguquko zizobonakala kudokhumenti yakho yonke.
Izimpawu ezicatshangelwe kabusha - Yonga isikhathi ngezimpawu, izinto zokwakha ezingasetshenziswa kabusha eziqeda isidingo sokuthola nokuhlela isenzakalo ngasinye sefa kudokhumenti. Buyekeza eyodwa futhi bazovuselela yonke indawo, noma bakhethe ukubhala ngaphezulu kwezimo ezithile. Izimpawu zingaba yimidwebo ye-vector, izithombe ze-raster, noma izinto zombhalo, futhi zingasetshenziswa njengezinto ezingaphakathi kwamaGridi Wokuphinda.
Imitapo yolwazi ye-Creative Cloud - Ngokuhlanganiswa kwe-Creative Cloud Libraries, ungafinyelela futhi usebenzise izithombe ze-raster, imibala nezitayela zezinhlamvu ezenziwe ku-Photoshop CC, Illustrator CC, nezinye izinhlelo zokusebenza ze-Creative Cloud ezivela ngaphakathi kwe-XD, futhi uzisebenzise futhi noma kuphi kumadokhumenti akho.
Umhloli Wendawo Yomongo - Sebenza esikhaleni esingahlanganisiwe ngenxa yoMhloli Wempahla owazi umongo, okhombisa kuphela izinketho zezinto ozikhethile. Shintsha izakhiwo ezinjengombala womngcele nobukhulu, gcwalisa imibala, izithunzi, ukufiphala, i-opacity, nokujikeleza, nezinketho zokufinyelela zokuqondanisa, ubukhulu, neGridi Yokuphinda.
Ukuzulazula kwe-canvas smart - Sondeza kalula indawo ethile yedizayini yakho, noma yenza ukukhetha ebhodini lobuciko bese usebenzisa isinqamuleli ukusondeza kuso ngqo. Pan noma sondeza ngegundane lakho, iphedi yokuthinta, noma izinqamuleli zekhibhodi. Futhi uthole ukusebenza okuhle noma ngabe unamakhulu ama-artboards.
Izendlalelo zomongo - Hlala uhlelekile futhi ugxile ngenkathi uphatha ukwakheka okuyinkimbinkimbi ngenxa yendlela yokuqukethwe kwezendlalelo. I-XD igqamisa kuphela izingqimba ezihambisana ne-artboard osebenza kuyo, ukuze ukwazi ukuthola ngokushesha futhi kalula okudingayo.
Amathuluzi wokuqondisa wesakhiwo - Dweba, uphinde usebenzise, ​​uphinde uhlanganise kabusha izinto zedizayini usebenzisa i-snap-to grids namanye amathuluzi wokuhlela enembile akusiza ukuthi wakhe izilinganiso ezihlobene phakathi kwezinto, imaski enezimo, iqembu, ukukhiya, ukuvumelanisa, nokusabalalisa izinto zokwakha, nokuningi.
Imiphumela yokufiphaza - Fiphaza ngokushesha into ethile noma isizinda sonke ukushintsha iphuzu ledizayini yakho, ulinike ukujula nobukhulu.
I-gradients eqondile ehlukahlukene - Dala ama-gradients amahle alinganayo usebenzisa izilawuli ezibukwayo ezilula kodwa eziqondile ku-Pick Pick. Ungangenisa futhi ama-gradients kusuka ku-Photoshop CC ne-Illustrator CC.
Ithuluzi Lesimanje Lesipeni - Dweba ubujamo nezindlela kalula ngethuluzi lePeni. Sebenzisa imikhondo yangokwezifiso, engeza noma ususe amaphoyinti okubambelela, lawula kalula imigqa, futhi ushintshe phakathi kwezindlela ezigobile nezine-angled - konke ngethuluzi elifanayo.
Ukuhlelwa kweqembu le-Boolean - Dala futhi uzame ubujamo obuyinkimbinkimbi ngokuhlanganisa amaqembu ezinto usebenzisa opharetha be-Boolean abangonakalisi.
Isitayela sokubhala - Isitayela sombhalo esinokulawula okuqondile ukuthuthukisa ulwazi lomsebenzisi. Lungisa kalula izinto zokuthayipha ezifana nefonti, uhlobo lobukhulu, usayizi, ukuqondanisa, isikhala sezinhlamvu, nesikhala somugqa. Shintsha ukubukeka kombhalo wakho ngendlela efanayo oguqula ngayo ezinye izinto ku-XD njengokukhanya, ukugcwalisa, ingemuva nemiphumela yokufiphaza, nemingcele.
Ukulawulwa kombala okulula - Khetha imibala ngokufaka amanani ngqo noma ngokusampula kusuka ngaphakathi noma ngaphandle kwe-XD nge-Eyedropper. Dala futhi ulondoloze ama-swatches ombala, bese usebenzisa izinqamuleli zamakhodi we-hexadecimal ku-Pick Pick.
Izinsizakusebenza ze-UI - Idizayini esheshayo ne-prototype ye-Apple iOS, i-Google Material Design, namadivayisi we-Microsoft Windows asebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme zomsebenzisi.
Kopisha bese unamathisela kusuka kwezinye izinhlelo zokusebenza zokwakha - Letha imidwebo ku-XD evela ku-Photoshop CC ne-Illustrator CC.
Ukubuka kuqala kwe-iOS ne-Android kokuqukethwe - Hlola kuqala ukwakheka kwakho nakho konke ukuxhumana kumadivayisi uqobo owakhombe. Yenza izinguquko kudeskithophu bese uzihlolela kumadivayisi akho ukuthembeka nokusetshenziswa.
Ukuchazwa kwe-Hotspot - Qokomisa ngokuzenzakalela izindawo zokuhlala ezikuhlobo lwakho ukuze abasebenzisi bakwazi ukubona ukuthi iziphi izindawo ezisebenzisanayo nezichofozekayo.
Ukuphathwa kwesibonelo - Dala ama-URL amaningi kusuka kufayela elifanayo ukwaba izinhlobo ezahlukahlukene zohlobo lwakho. Yabelana ngenombolo engenamkhawulo yama-prototypes, futhi ufinyelele kalula futhi uwasuse kusuka ku-akhawunti yakho ye-Creative Cloud.
Qopha ukusebenzisana kokufana njengamavidiyo - Njengoba uchofoza ekubukeni kwakho kuqala, rekhoda ifayela le-MP4 ongabelana ngalo nethimba lakho noma ababambiqhaza (iMac kuphela).
Thumela ubuciko, izimpahla, namabhodi wobuciko - Thumela izithombe nemiklamo ngamafomethi we-PNG ne-SVG, ongayilungiselela i-iOS, i-Android, iwebhu, noma izilungiselelo zakho zangokwezifiso. Thekelisa yonke i-artboard noma izinto ezingazodwana. Futhi wabelane ngamafa namabhodi wabuciko ngokuwathumela njengamafayela e-PDF ngamanye noma njengefayela elilodwa le-PDF.
Ukusekelwa kwezilimi eziningi - Izilimi ezisekelwayo zifaka phakathi isiNgisi, isiFulentshi, isiJalimane, isiJapane nesiKorea.
Izaziso ze-imeyili zokuphawula - Thola izaziso ze-imeyili lapho ababambiqhaza bebeka amazwana kuzimpawu zakho zewebhu. Ama-imeyili angathunyelwa ngawodwana noma afakwe kugayidi yansuku zonke
Ngaphezu kwakho konke, i-Adobe XD iza nelayisense lami le-Adobe Creative Suite!
Ukudalulwa: Singabanikazi be-Adobe.
Tags: adobei-adobe suite yokudalaadobe xdi-prototypingdesign uiisipiliyoni somsebenzisiisikhombimsebenzisi somsebenzisi
I-Epson LightScene: Okuhlangenwe nakho Kokuthengisa Okusebenzisana ne-Digital Projection